8k vs 4k vs 1080p ividiyo: uyintoni umahluko kwaye sisiphi isigqibo ekufuneka urekhode kuso?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-8K vs 4K vs 1080p ividiyo: yintoni umahluko kwaye sisiphi isigqibo ekufuneka urekhode kuso?
I-8K vs 4K vs 1080p ividiyo: yintoni umahluko kwaye sisiphi isigqibo ekufuneka urekhode kuso?
Itekhnoloji yokucinga yeselfowuni iya isiba ngcono, kwaye kunjalo nangomgangatho wevidiyo iifowuni zethu ezinokuzirekhoda. Isisombululo, ngakumbi, sifikelele kumanqwanqwa amatsha, kunye neefowuni eziphezulu ezikwaziyo ukudubula kwanevidiyo ye-8K ukuba i-1080p okanye i-4K ayichazwanga ngokwaneleyo. Isisombululo esiphakamileyo sithetha iipikseli ezininzi kwividiyo yakho, eguqulela inkcukacha ezibukhali kunye nobukhali.
Kodwa yintoni umahluko phakathi kwe-1080p, 4K, kunye ne-8K isisombululo sevidiyo? Unokhetho kwifowuni yakho, kodwa sisiphi isigqibo sevidiyo omele ukusikhetha? Vumela ukuba sichaze.
Uyawubona umahluko phakathi kwe-1080p, 4K, kunye ne-8K?
Ngaba isisombululo esiphezulu sibhetele kune-FPS ephezulu?
Sisiphi isigqibo endifanele ukusikhetha?
Masiqale ngeziseko.Ithetha ntoni i-1080p, 4K, kunye ne-8K xa isiza kwividiyo?
I-1080p- ekwabizwa ngokuba yi-HD epheleleyo, isisombululo sevidiyo esingu-1080p sinika ubungakanani bomfanekiso we-1920 nge-1080 pixels. Uninzi lweefowuni eziphakathi kuluhlu namhlanje ziza nemiboniso ye-1080p, kwaye ke neTV ezingabizi kakhulu, iilaptops, kunye neeprinta zePC. Esona sisombululo sevidiyo esasetyenziswa ngokuxhaphakileyo kwi-YouTube namhlanje. Iimuvi kwiidiski eziqhelekileyo zeBlu Ray zinesisombululo se-1080p.
4K okanye i-UHD- la magama mabini asetyenziselwa ukuchaza isisombululo esifanayo sevidiyo: 3840 nge-2160 pixels. I-4K sesona sisombululo siphezulu sifumaneka kwiinkonzo zokusasaza ezinjengeNetflix, iHulu, iHBO Max okanye iAmazon Prime TV. Uninzi lweTV ezintsha ziza nezikrini zesi sigqibo. Nangona kunjalo, zimbalwa iifowuni ezinemiboniso ye-4K esele ikhutshiwe.
8K-Isisombululo esona siphezulu osifumene kumabonwakude kwintengiso siguqulela kubungakanani bomfanekiso we-7680 nge-pixels ezingama-4320. Usengumgangatho omtsha wesisombululo, kwaye ngelixa kukho iiTV kwimarike ezisebenzisayo, ezi zinqabile ukuzifumana kwaye zibiza kakhulu.
Kwithiyori, isisombululo esiphakamileyo sithetha iipikseli ezininzi, kunye neepekseli ezininzi zithetha iinkcukacha ezithe kratya kwividiyo yakho. Xa kuthelekiswa ne-1080p, ividiyo ye-4K ineepikseli eziphindwe kane, kwaye i-8K inamaxesha ali-16 njengakwividiyo eneenkcukacha.
Ukuwubona ngamehlo umahluko, sisebenzise i-Samsung Galaxy S21 Ultra yethu ukubamba iividiyo ezintathu zeyona ndawo inye-enye kwi-1080p, enye kwi-4K, kunye nesisombululo esinye se-8K. Lo ngumba ekubhekiswa kuwo:
Emva koko sakhupha isakhelo esinye sothelekiso-ngecala kwaye sondeza indawo ebonisiweyo. Nantsi umahluko okhoyo:
< Full HD 1080p crop Isityalo se-4K Ultra HD>
Umahluko kumgangatho phakathi kwe-1080p kunye ne-4K ubukhulu becala-ukuya kuthi ga apho kwi-snapshot ye-1080p sisokola ukwahlula into esiyijongileyo. Nge-4K, izinto zingcono kakhulu. Umfanekiso ubukhali kakhulu, nangona iinkcukacha ezincinci zisabonakala ngokucacileyo.
< 4K Ultra HD crop 8K 100% isityalo>
Apha kulapho izinto zifumana umdla. Kwisityalo se-4K, akunakwenzeka ukuba ufunde isicatshulwa esibhaliweyo kumatshini, ngelixa ukwi-8K, ungasifunda. Xa kuthelekiswa ne4K, kujongeka ngathi kukho umahluko omkhulu kwakhona.
Kodwa ngaba uyawubona umahluko phakathi kwe-1080p, 4K, kunye ne-8K?
Ngokobuchwephesha, kukho umahluko omkhulu phakathi kwezigqibo ezahlukeneyo. Kodwa kubomi bokwenyani, kuya kuba yinto engenakwenzeka ukuba uqaphele umahluko kwifowuni yakho phakathi kwe-4K kunye ne-8K. Ngokubhekisele kwi-1080p, ukuba unefowuni enkulu kune-intshi ezi-6 eboniswayo, ubuncinci isisombululo se-FHD + uya kubona umohluko xa kuthelekiswa ne4K, eyokugqibela ikunika iinkcukacha ezibonakala ngakumbi. Kodwa ukuba ifowuni yakho ayiyiyo loo nto inkulu kumboniso wee-specs, awuzukukwazi ukwahlula izigqibo ezimbini komnye komnye.
Ukuba unomdla ukuba uhlala ngokufanayo nezikrini ezinkulu, impendulo nguhayi. Konke kuxhomekeke kwisisombululo seTV okanye esweni, ukuba i-1080p, awuzukuwubona umahluko xa udlala i-4K okanye i-8K, ngaphandle kokuba usondeza. Ukuba unayo i-TV ye-1080p okanye esweni, awuzokuphumelela babe nako ukuqaphela umahluko phakathi kwezi zigqibo zintathu. Kodwa ngenye imini uza kuthenga entsha, kwaye amathuba kukuba iya kuba yi-4K, njengoko oku kuye kwaba ngumgangatho kumabonwakude kunye nokubeka esweni. Oko kwenza i-4K isisombululo esingcono sokufota ngaphakathi ukuba uceba ukubukela ezo vidiyo kwiTV okanye kwi-PC esweni.
Kwi-2021, ii-smartphones zinendawo yokugcina ngakumbi kunangaphambili. Kunqabile ukubona i-smartphone engaphantsi kwe-64GB yokugcina. Oku kunyuka komthamo kukwathetha ukuba iividiyo ezinkulu kulula ukuzigcina kwi-smartphone yakho.
Zingaphi iindawo izigqibo ezahlukeneyo ezithatha kuzo i-smartphone yakho? Sivavanye iifowuni ezimbini ezaziwa kakhulu ngo-2021 kwaye sinempendulo.
I-Samsung Galaxy S21 Ultra, MB ethathwe ngomzuzu wevidiyo:
H.264 / ngomzuzu
I-HEVC-H.265 / ngomzuzu
1080p, 30fps I-105MB 60MB
I-iPhone 12 Pro Max, MB ethathwe ngomzuzu wevidiyo:
12 Pro uMax
1080p, 30fps I-117MB
1080p, 60fps 174MB I-95MB
Nge-128GB yokugcina, unokurekhoda iiyure ezili-17 ze-1080p 30fps okanye iiyure ezingama-6 ze-4K 30fps zevidiyo kwifomathi yeH.264. Ukuba ukhetha i-High-Efficiency H.265 enye, uya kuba nakho ukurekhoda iiyure ezingama-30 ze-1080p 30fps, iiyure ezili-11 ze-4K 30fps kunye neeyure ezi-3 ze-8K 24fps i-video. iinguqulelo ezisisiseko, ke kukhuselekile ukuba nokuba ukhetha isisombululo esingaphezulu kwe-1080p, uya kuba nokugcina okuninzi oza kusebenza nakho.
30fps vs 60fps. Ingaba ithetha ntoni?
I-FPS imele izakhelo ngomzuzwana. Ukuba ukhetha useto lwevidiyo ye-fps ephezulu, ifowuni yakho iya kurekhoda isakhelo esingaphezulu ngomzuzwana, esiya kuthi senze ividiyo ibonakale igudileyo, kodwa ubungakanani befayile yevidiyo buya kuba bukhulu.
Nantsi isampulu esiyenzileyo ngaphambili yevidiyo ye-30fps erekhodwe nge-smartphone:
Njengoko ubona, i-30fps ijongeka intle kwaye ithembekile. Le fomathi yevidiyo ithatha indawo encinci kune-60fps enye, kodwa ikwavela njengokugudileyo, njengoko umahluko kwinqanaba lesakhelo likhulu.
Isampulu yevidiyo ye-60fps ijongeka intle nayo, nangona iinyikima zibonakala ngakumbi kule fomathi. Kwakhona kuthatha indawo engaphezulu. Ekupheleni kosuku konke kuxhomekeke kwinto oyenzayo kunye nefilimu. Ukuba ufota izinto ezimileyo awudingi i-60fps, kodwa ukuba ufota umnyhadala othile njengomdlalo wezemidlalo, inqanaba lokuhlaziya eliphezulu liyavakala.
Kodwa ngaba ufuna i-60fps? Kwiimeko ezininzi, i-30fps ingaphezulu ngokwaneleyo. Uninzi lweevidiyo kwi-intanethi zidutyulwa kwi-30fps. Uninzi lwamajelo eTV asasaza kwifreyimu efanayo. Isakhelo esiphakamileyo, i-60 isakhelo-ngomzuzwana sisigqibo esihle ukuba urekhoda izigcawu ezihamba ngokukhawuleza ezinjengemidlalo, kodwa ayifanelekanga kangako kwiimeko ezikhanyayo ezisezantsi. Ukucwangciswa kwe-60fps kukwakunika ukhetho lokucothisa ividiyo iye kwi-0.5x yeziphumo zobugcisa ngaphandle kokuthintitha kwevidiyo.
Ewe isisombululo esiphakamileyo siphantse sibe ngcono ukuba ufuna ukukhetha phakathi kwezi ndlela zimbini zevidiyo. Ukuba ukhetho luphakathi kwe-1080p kwi-60fps kunye ne-4K kwi-30fps, uya kuba ngcono xa ukhetha okwesibini kuba, zonke izinto eziqwalaselweyo, bubungqina obuzayo. Ukuba ukhetha phakathi koseto lwe-FPS kwisisombululo esinye, ukhetho luya kuxhomekeka kwindawo ofuna ukuyirekhoda okanye ungakanani ukugcinwa oseleyo.
Khetha i-1080p ukuba unayo ifowuni engaphantsi kwe-128GB yokugcina. Uninzi lwamaqonga eendaba ezentlalo, njenge-Instagram, i-Twitter kunye ne-Facebook, iividiyo ezi-1080p zingaphezulu ngokwaneleyo.
Khetha i-4K ukuba une-128GB yokugcina okanye nangaphezulu. KwiYouTube, ukusetwa kwevidiyo ye-4K ngokuqinisekileyo yeyona nto ilungileyo onokuyikhetha kuba lolona manyano lubalaseleyo phakathi komgangatho kunye nobungakanani. Ukubukela kwiTV enkulu okanye kwiscreen sekhompyuter, i-4K iphinde ibe yeyona ndlela ilungileyo kwimiboniso yangoku. Imakethi igcwele ngeemveliso zescreen ze4Kk, kwaye nokuba awunayo imveliso ngesi sisombululo, uya kuthenga enye kungekudala.
Khetha i-8K ukuba uhlala usitrayikisela ukugqibelela, ufuna ividiyo ebalaseleyo ngokweenkcukacha, kwaye ubuncinci i-256GB yokugcina. Kodwa gcinani engqondweni ukuba ukurekhodwa kwe-8K kunokuphuma kungcangcazele, oko kuthetha ukuba kungafuneka usebenzise i-tripod, ngakumbi ukuba ucwangcisa ukusebenzisa ividiyo ngokufanelekileyo. Kwakhona, iividiyo kwisisombululo se-8K zithatha indawo eninzi, kwaye ezinye ii-smartphones ezinokurekhoda i-8K zinengxaki yokufudumeza.
Ngaba i-iPhone 11 Pro Max kufanelekile ukuyithenga ngo-2021?
I-AT & T ye-Samsung Galaxy S7 kunye ne-S7 Edge ifumana uhlaziyo olutsha, izisa ukuphuculwa kokhuseleko
Iindlela ezi-3 zokudlulisa iifayile kwi-PC yakho ukuya kwi-iPad (2021)
I-T-Mobile 'ilibele' ukukhankanya iinkcukacha ezicaphukisayo malunga nesicwangciso sayo soQhagamshelo esinexabiso eliphantsi
Ukuthelekisa i-Samsung Galaxy S7 kunye ne-LG G4